शाहरुखका छोरा आर्यनको जीवनशैली राजकुमारलाई बिर्‍साउने
२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार, काठमाडौं । सेलिब्रेटीका छोरा छोरीलाई लिएर मानिसहरुको मनमा प्राय जिज्ञासा उब्जने गरेको छ । कि उनिहरु के खान्छ, कसरी बस्छ कहा पढ्छ र कति खर्च गर्छ आदि । बलिउडका किंग खान शाहरुख खानका छोरा हुन् आर्यन। आर्यन पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेका छन् । आर्यनका बिषयमा जान्न चहान्छन् उनको फ्यान । ... बाँकी अंश»
यी बलिउड सुपरहिट चलचित्र, जसलाई ऐश्वर्याले त्यागेकी थिइन्
२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार, काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनको आज ४५औ जन्मदिन हो । ऐश्वर्या सन् १९७३ नेभेम्बर १ मा भारतको कर्नाटकामा जन्मिएकी हुन् । ... बाँकी अंश»
मधुमासमा रमाउँदै प्रियंका र निक
२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार, काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र अमेरिकी गायक निक जोनसको मधुमासको तस्बिर समाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको छ । प्रियंका श्रीमान् निकसँग हनिमून मनाइ रहेकी छन् । दुवै ओमानमा हनिमून मनाइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
ओमान घुम्दै प्रियंका र निक : दोस्रो हनिमूनको तयारी
२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार, काठमाडौं । मुकेश अम्बानीको छोरी ईशा अम्बानीको विवाह पुर्वको समारोहमा सहभागी भएपछि प्रियंका चोपडा श्रीमान् निक जोनससँग हनिमून मनाइ रहेकी छन् । दुवै ओमानमा हनिमून मनाइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रहरी इन्सपेक्टर पाण्डेको ‘बिते कति रात....’
२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार, काठमाडौं । एपिक नेपालले एक समारोहका बीच “एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड २०७५ अन्तर्गत नेपाली सांगितिक क्षेत्रका विविध ६६ वटा विधामा नोमिनेशनमा परेका गीतका श्रष्टालाई अवार्ड वितरण गरेको छ । हरेक बिधाबाट उत्कृष्ट ५–५ गीतका सांगितिक श्रष्टालाई प्रमाण पत्र वितरण गरेको एपिक नेपालका अध्यक्ष अमन श्रेष्ठले बताए । ... बाँकी अंश»
जुन केटीले फोटो खिचायो, उसैलाई बितायो !
२०७५ मङ्सिर २५ मंगलबार, काठमाडौं । हग हफनरको मृत्यु २०१७ को सेप्टेम्बर २७ मा अमेरिकाको लसएन्जल्समा भएको हो । उनी विश्वभरमा चर्चित पुरुष पत्रिका ‘प्लेब्वाई’का मालिक थिए । ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएका उनले एकपटक अनौँठो अभिव्यक्ति दिएका थिए जसको कारण उनी चर्चित छन् । ... बाँकी अंश»
सैफ - करिनाका छोराको सुसारेलाई मोदीको जति तलब
२०७५ मङ्सिर २४ सोमबार, काठमाडौं । कुनै स्टारको छोराछोरी हुनुले कत्तिको अर्थ राख्छ भन्ने विषयमा जानकारीका लागि सैफ अली खान र करिना कपुरका छोरा तैमुरलाई हेर्दा हुन्छ । पछिल्लो समय उनको लवाइ खुवाइदेखि चालढाल लगायतका विषयहरु निकै चासोका साथ हेर्न थालिएको छ । यस्तोमा खासै धेरै चर्चामा नआएको विषय हो – तैमुरको स्याहार गर्ने महिलाको सुविधाहरु । ... बाँकी अंश»
बलिउडमा प्रेमी-प्रेमीका बनेर प्रेम र दाजु-बहिनी बनेर आँशु बाढेका कलाकार
२०७५ मङ्सिर २४ सोमबार, काठमाडौं । हुन त चलचित्रमा देखाइएको सम्बन्धको बास्तविक जीवनमा कुनै अर्थ राख्दैन । चलचित्रको चरित्र फिल्मको स्क्रिप्टमा निर्भर हुन्छ । ... बाँकी अंश»
बलिउडमा प्रेमी-प्रेमीका बनेर रोमान्स र दाजु-बहिनी बनेर आँशु निकालेका कलाकार
कपिलको विवाहमा बलिउडका दुई स्टारलाई मात्र निम्तो
२०७५ मङ्सिर २४ सोमबार, काठमाडौं । पछिल्लो केही समययता भारतीय कमेडियन कपिल शर्माको विवाहको चर्चा चलिरहेको छ । उनको विवाहको निमन्त्रणा कार्ड, भेन्युलगायतका कुराहरुको चर्चा जारी छ । उनको विवाहको महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने उनको विवाहमा बलिउडका केवल अमिताभ बच्चन र सलमान खानलाई मात्र निमन्त्रणा पठाइएको छ । ... बाँकी अंश»
अम्बानीको छोरीको विवाहमा सलमान खान 'ब्याकग्राउण्ड डान्सर'
२०७५ मङ्सिर २४ सोमबार, काठमाडौं । भारतीय अर्वपति मुकेश अम्बानी र नीता अम्बानीको छोरी ईशा अम्बानीको विवाह पुर्वको समारोहमा देश-विदेशबाट चर्चित व्यक्तिहरु आउने क्रम जारी छ । ... बाँकी अंश»
कपिल शर्माको विवाहमा बलिउडबाट सलमान खान र अमिताभ बच्चनलाई मात्र निम्तो
२०७५ मङ्सिर २३ आइतबार, काठमाडौं । पछिल्लो केही समययता भारतीय कमेडियन कपिल शर्माको विवाहको चर्चा चलिरहेको छ । उनको विवाहको निमन्त्रणा कार्ड, भेन्युलगायतका कुराहरुको चर्चा जारी छ । उनको विवाहको महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने उनको विवाहमा बलिउडका केवल अमिताभ बच्चन र सलमान खानलाई मात्र निमन्त्रणा पठाइएको छ । ... बाँकी अंश»
विवाहले जुरायो संयोग, अम्बानीको छोरीको विवाहमा हिलारी
२०७५ मङ्सिर २३ आइतबार, काठमाडौं । भारतीय अर्वपति मुकेश अम्बानी र नीता अम्बानीको छोरी ईशा अम्बानी विवाहको तयारी शुरू भइ सकेको छ । नीता अम्बानीको आनन्द पीरामलसँग मुम्बईमा १२ डिसेम्बरमा विवाह हुदैछ । ... बाँकी अंश»
शाहिद कपुरको पेटमा क्यान्सर ! परिवारले जारी गर्‍यो प्रतिक्रिया
२०७५ मङ्सिर २३ आइतबार, काठमाडौं । बलिउड अभिनेता शाहिद कपुरको पेटमा क्यान्सर भएको समाचार केहि दिनदेखि बाहिरिएको छ । जस कारण शाहिदका फ्यान निराश बनेका छन् । ... बाँकी अंश»
श्रृङ्खला मिस वर्ल्डको उत्कृष्ट १२ मा सीमित
२०७५ मङ्सिर २२ शनिबार, काठमाडौं । नेपालकी श्रृङ्खला खतिवडा मिस वर्डको उत्कृष्ट १२ मा सीमित भएकी छिन् । पहिलो चरणमा प्रतियोगीबाट उत्कृष्ट १२मा ... बाँकी अंश»
जमानी, जवानी र वेइमानीको संयोग जय श्रीदाम
२०७५ मङ्सिर २१ शुक्रबार, काठमाडौं । धर्मको नाममा धर्मकै बदनाम गर्नेहरुको कथालाई लिएर निर्माण भएको चलचित्र जय श्रीदामको ट्रेलर सार्वजनीक भएको छ । धर्मको आडमा विकृतिको जड बनेका धर्मभीरुहरुलाई नै बार्गेनिङ गर्ने युवाको कथा समेत जय श्रीदाममा समेटिएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर २१ शुक्रबार, काठमाडौं । बलिउड स्टारको जीवनशैली बारे सबैको चासो हुन्छ । कलाकारको जस्तो लत्ताकपडा, गाडिघोडा, खानपिन, रहनसहन हरेक आम मानिसको चाहना हुन्छ । प्राय स्टार यसको शौखीन पनि हुन्छन् । उनिहरु आफ्नो जीवनशैली राजकीय बनाउन हर संभव कोशिश गर्ने गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
दूराचारको आरोपमा मिका सिंह पक्राउ
२०७५ मङ्सिर २१ शुक्रबार, काठमाडौं । यौन दूराचारको आरोपमा बलिउडका चर्चित गायक मिका सिंह पक्राउ परेका छन् । एक किशोरीले यौन शोषणको आरोप लगाएपछि दुबई प्रहरीले युएईको अबुधाबीमा हिरासतमा लिएको हो । ... बाँकी अंश»
२०७५ मङ्सिर २० बिहिबार, काठमाडौं । अक्षय कुमार र रजनीकान्तको चलचित्र २.० चीनमा रिलीज हुने भएको छ । चलचित्र २०१९ मा चीनको ५६ हजार स्क्रीन्समा सबटाइटल्ससहित रिलीज हुदैछ । चलचित्र प्रोड्यूस गर्ने लाइका प्रोडक्शनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्वीट गर्दै सो जानकारी दिएको छ । चलचित्रले अहिलेसम्म ६ दिनमा कुल ४८८ करोड वर्ल्ड वाइड कमाई गरेको छ । ... बाँकी अंश»